လူငယ်နှင့် ဘ၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူငယ်နှင့် ဘ၀
Posted by manawphyulay on Sep 28, 2013 in Copy/Paste | 8 comments
လူငယ်ဆိုတာ အနာဂတ်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ လေ့လာကြည့်တော့ သူတို့တွေရဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ပညာရေးဟာ စဉ်ဆက် မပြတ် လေ့လာနေရတဲ့ ပညာရေးဖြစ်နေတာ သွားတွေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့လို ကျောင်းပြီးဘွဲ့ရရင် လေ့လာစရာ ကုန်သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒီတစ်ခုသိပြီးရင် နောက်တစ်ခု ထပ်သိဖို့ အင်မတန်မှလိုအပ်လှပါတယ်။ ဒီတစ်ခု သုံးတတ်ရင် နောက်တစ်ခု သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့မှာ အချိန်တိုင်း လေ့လာနေရတယ်။ မျက်စိပွင့်နားပွင့် နေရမယ့်အချိန်တိုင်းတွေပါပဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် ဒေါက်တာဘွဲ့ရလူတစ်ယောက်ကို တော်ရုံ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒိုးတူဘောင်ဘက် အလုပ်လုပ်နေတာ တွေ့ရခဲပါတယ်။ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ လူတစ်ယောက်ကို သီးခြားအဆင့်မြင့်ပညာရှင် လူတန်းစားတစ်ယောက်လိုကို သတ်မှတ်ပြီး Bachelor အဆင့်နဲ့မတူတဲ့နေရာမှာ ထားကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကျောင်းအုပ်တို့၊ ဌာနမှုးတို့၊ ပါမောက္ခတို့ နောက် ပညာရှင်တွေတို့ စသဖြင့် ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ကြသူများလည်း ဒုနဲ့ဒေးတွေ့ရှိနေရတဲ့အပြင် အဲဒီနေရာတွေ မထားလို့ကလည်း မရဘူး။ တစ်ခြားနေရာတွေနဲ့ကျတော့ သူသိတာတွေက အံမဝင်တာတွေ၊ အသုံးချလို့မရတာတွေ ဖြစ်နေပြန်ပါရော သူတို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ကိုယ့်ဘေးဘယ်ညာကို ကြည့်လိုက်ရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ လခစားလို့ ထင်ရတဲ့ သူလိုကိုယ်လို လူတွေက ဒေါက်တာဘွဲ့ရနဲ့ အနည်းဆုံး Master တွေချည်းပါပဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ကို ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုလိုပဲ သုံးတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဘွဲ့ကသပ်သပ်၊ လုပ်တဲ့အလုပ်က သက်သက်နဲ့ပေါ့။ သူတို့တွေ နိုင်ငံမှာတော့ ဒီရထားတဲ့ ဘွဲ့ကိုပဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် နောက်တိုး ဘာသာရပ်တွေ ထပ်ထပ်လေ့လာပြီး လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးကို မြှင့်ယူကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သေချာတာကတော့ လေ့လာနေတဲ့သူဆိုတာ မလေ့လာပဲ ထိုင်နေတဲ့ သူထက်စာရင်တော့ အတွေးအခေါ်ရော၊ ဖန်တီးမှုရော ပိုကောင်းတာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက လူငယ်တွေကတော့ ကျောင်းပြီးတည်းက ထိုင်လိုက် ပျင်းလိုက် – ပျင်းလိုက် ထိုင်လိုက်နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး သွားပြီး အားလူးဖုတ်ရတာနဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမင်တဲ့သူတွေများလှပါတယ်။ လေ့လာဖို့ ဆိုတာလည်း မတွေးမိဘူး။ ဘယ်လိုလေ့လာရမယ် ဆိုတာကိုလည်း မတွေးတတ်ဘူး။ အင်တာနက်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့လူ မဟုတ်တော့ ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာလည်း နားမလည်သလို၊ ဘာတွေ လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဂဃနဏ မသိကြဘူး။ အဲဒါကြောင့် အင်တာနက်ခေတ် ကြီးမှာ လက်တစ်ကမ်းအကွာ ရှိနေလည်း ဘယ်နားသွား လေ့လာရမှန်း မစဉ်းစားချင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မပြောချင် တာက ဘာမှမသိလျှင် ဘာမှဖြစ်လာမည် မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဒီလို လိပ်စာပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ Websites တစ်ခုချင်းစီကို တစ်နေရာချင်းဆီ လိုက်ပြီး စာလိုက်ဖတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တာမို့ စာဖတ်ရတာလွယ်အောင် Google Reader သုံးခဲ့ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဖတ်ချင်တာတွေကို တစ်ချို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ Reader သုံးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားမလည်ကြသေးတာမျိုး ရှိနိုင်တာမို့ ဒီနေရာမှာ Reader တွေရဲ့ အားသာချက်တွေအကြောင်း နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပါရစေ။ Reader တွေသုံးရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က မိမိ ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ Websites တွေ/ Blogs တွေရှိရာဆီ တစ်နေရာချင်းစီသွားဖို့မလိုပဲ နေရာ တစ်နေရာတည်းကနေ သူ့ဆီက တက်သမျှ သတင်းကို စောင့်ကြည့်နေချင်လို့ပါ။ Reader တွေ သုံးပြီး စာဖတ်ခြင်း အားဖြင့် ကိုယ်ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ Websites တွေ / Blogs တွေက နေ့စဉ်တက်လေ့ရှိတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လွတ်သွား ကျော်သွားတာမျိုးမရှိပဲ နေ့စဉ်ပုံမှန် ဖတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တခြား အားသာချက်တွေကိုတော့ အကျယ်ချဲ့ပြီး မိတ်ဆက်မပေးတော့ပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း ပိုပြီး အဆင်ပြေတာက မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဖတ်မှတ်လို့ရသလို လေ့လာစရာတွေကလည်း နေရာတစ်ကာမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စာဖတ်ဖြစ်သွားတဲ့ နောက်မှာ ဘာတွေလုပ်ဆောင်လို့ ရမယ်ဆိုတာ အလိုလို နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ Feedly ဆိုတာ Add-ons တစ်မျိုးပါ – သူ့ကို Mozilla မှာလည်း Add-ons အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သလို – Google chrome မှာလည်း Extension တစ်ခု အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Feedly ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံဟာ အပြင်မှာ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် ဝယ်ပြီး ဖတ်နေရသလိုမျိုး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Websites တွေ / Blogs တွေက တက်လာတဲ့ သတင်းတွေကို အသွင်ဆန်းနဲ့ ဖော်ပြပေးတာမို့လို့ စွဲဆောင်မှုလည်း ရှိသလို အင်မတန်မှလည်း စာဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် အားလုံးကို ပြောချင်တာက နိုင်ငံမှာ အသုံးဝင် လူငယ်တွေဖြစ်လာစေဖို့ စာဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ လေ့လာမှတ်သားစေချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ပြောမိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ ပြောချင်တာတွေကို စာပေဖြင့် သွန်းလောက်နေပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်အတွက် ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်သစ်တွေလိုပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်များ စာဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ Websites ပေါင်းထောင်းသောင်းမကရှိတဲ့ထဲက အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် အနည်းငယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘယ်လောက်မှ မရှိသေးပါဘူး – ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီ့ထက်တိုးပြီး လေ့လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယယ် မိမိ သိတာတွေကိုလည်း မိမိလူမျိုးရဲ့ နည်းပညာအသိနဲ့ နည်းပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားစေဖို့ မျှဝေပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း လူငယ်နဲ့ဘ၀ ဆောင်းပါးကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။
ဝေလေလေ ဖြစ်နေတဲ့အချိန် . .. ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတာ .. ရှက်မိသလိုခံစားရပါတယ် . . လေ့လာလိုက်စားမှုတွေကို ဘယ်တော့မှ မရပ်ပစ်နဲ့ ဆိုတဲ့ ဆရာသမားရဲ့ စကားကိုလည်း အထပ်ထပ်ပြန်ကြားနေမိပါတယ် .. ကျွန်မရဲ့ ကောင်းကင်မှာ ကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ပဲ ကိုယ့်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိမ်မဲတွေက ကျွန်မရဲ့ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်တွေကို ဝေဝါးသွားစေရုံမကဘဲ မမြင်နိုင်လောက်အောင်ထိ ဖုံးလွှမ်းခံနေတာရမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ စိတ်ပျက်မိပါတယ်. . ဒီပို့စ် အတွက် ကျေးဇူးပါ.. တိမ်တွေမရှိတော့ အောင် စွမ်းဆောင် မပေးနိုင်ပေမယ့်လည်း ရည်မှန်းထားတာလေးတွေ လုပ်သင့်တာလေးတွေ ပြန်မြင်လာအောင် ကျွန်မကောင်းကင်ပေါ်က တိမ်မဲတွေ နေရာရွှေ့သွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ…
နောက်ပိုင်း အချိန်နဲ့အမျှ သတင်းတွေ အလွယ်တကူ သိချင်သပဆိုရင် ….
ဖေ့စ်ဘုတ် ကိုသာ သုံးဗျာ ….
ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးနေတိုင်း အလကား အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်လို့ ပြောလို့ မရတော့ဘူး …
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ မြန်မာ သတင်းမီဒီယာတွေတင် မက၊ ကမ္ဘာ့ သတင်းမီဒီယာတွေပါမကျန်
အို … တကယ်ကောင်းတဲ့ ပေ့ခ်ျတွေ ဂလုတွေဆို စုံစိနေတာပဲ ….
မနေ့ကတောင် ချယ်လ်ဆီးပွဲ ကြည့်နေတာ ….
ပထမပိုင်းပြီးလို့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် ခဏ တက်ကြည့်လိုက်တာ …
အမလေး … ဘီဘီစီဘားမိ က ပ ပိုင်း ရလဒ် သတင်းတောင် တက်နေပြီ ….
ဒီပို့စ်က တော်တော်ကို လူငယ်တွေအတွက် စေတနာပါတဲ့ ပို့ စ်ပါ…။
အချိန်နဲ့ ပညာကို နားလည်ပြီး လိုချင်စိတ်ရှိလာအောင် အသုံးချတတ်အောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါဘဲ…
အကျိုးပြုစာတွေ ..အများကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေ မနောဖြူလေးရေ..။
ဆြာခေါင်ပြောသလိုပါပဲ ..အန်တီမနောရယ်….စေတနာပါတယ် ပို့စ်က
google reader အသုံးတဲ့တာ မနောပြောလို့ စမ်းကြည့်ပါအုံးမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီပဒုမ္မာ။ အဲဒါသုံးတော့ အသစ်တင်တိုင်း ကိုယ့်ဆီမှာပေါ်တော့ အဆင်သင့်ဖတ်လို့ရတာကြောင့်ပါရှင်။
မနောရေ ဟိုတလောက မန့်တဲ့အထဲ နေမကောင်းဘူးလို့ သိရတယ်။ အခု နေကောင်းသွားပြီလား။ အမလည်း မနောပြောသလို စာတွေဖတ်နိုင်ချင်ပါတယ်။ google reader ဆိုတာကို မသိသေးဘူး။
အရမ်းစေတနာပါတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မနောရေ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ။ ခုတော့ ဆေးခန်းပြလိုက်၊ ဆေးစားလိုက် လုပ်နေပါတယ်။ သက်သာလာပါပြီ။ ခုလို သတိရပေးတဲ့အတွက်လည်း ရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိပါတယ်မမ။